‘श्री ५ अम्बरे’ को विशेष शो, फिल्म कस्तो हो ? (फोटो फिचर) « Mazzako Online
‘श्री ५ अम्बरे’ को विशेष शो, फिल्म कस्तो हो ? (फोटो फिचर)
मज्जाको अनलाईन समाचार, काठमाण्डौं, मंसिर ०५–
आजदेखि देशभर प्रदशर्नमा आएको ‘अन्तराल’ निर्देशक दिपा बस्नेतद्वारा निर्देशित फिल्म ‘श्री ५ अम्बरे’ को विशेष शो सम्पन्न भएको छ । कमलादिस्थित कुमारी हलमा सम्पन्न शोमा पुर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र एमाले नेता प्रदीप ज्ञावली समेत सहभागी भएका थिए ।
डा.भट्टराई शो सुरु भएको केही समयपछि हलबाट बाहिरिएका थिए भने नेता ज्ञावलीले पुरै फिल्म हेरे । उनले ‘श्री ५ अम्बरे’ को विषयवस्तु मन परेको प्रतिक्रिया दिए ।
राजनीतिक दलका नेता सहित फिल्म ‘श्री ५ अम्बरे’ को विशेष शोमा फिल्म युनिट सहित अन्य फिल्मकर्मी र सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति थियो । अभिनेत्रीद्धय प्रियंका कार्की र केकी अधिकारी भने देश बाहिर रहेकाले आफ्नो फिल्मको शोमा सहभागी हुन पाएनन् ।
कस्तो छ ‘श्री ५ अम्बरे’ ?
सडक बालबालिकाको जीवन कसरी गुज्रिएको हुन्छ, के–कस्ता समस्याहरु आइपर्छन् र समस्याको समाधानका लागी कस्तो–कस्तो बाटो अवलम्वन गर्छन् ? यि र यस्तै विषयवस्तुमा फिल्म ‘श्री ५ अम्बरे’ घुमेको छ । यस फिल्ममा अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री केकी अधिकारीको मुख्य भुमिका रहेको छ । जिवनसाथी फिल्मस्को ब्यानरमा निर्मित फिल्म ‘श्री ५ अम्बरे’ लाई अभिमन्यू निरवीले लेखेका हुन् ।